Cheap Vetikal Disc inggwakọta & edingnụrụ Ngwa Ngwa Ngwa na |lọ Ọrụ | YiZheng
Gịnị bụ Vetikal Disc inggwakọta feeder Machine eji?
Na Diset Vetikal Gwakọta Nrier Igwe a na-akpọ diski feeder. Igbapụta n'ọdụ ụgbọ mmiri nwere ike na-achịkwa mgbanwe na orùrù nke ukwu nwere ike gbanwee dị ka n'ezie mmepụta ina. Na onyinye mmepụta fatịlaịza akara, naVetikal Disc inggwakọta feeder Machine a na-eji na Nchikota na ọtụtụ ala extrusion granulators na-enye ọbụna ihe onwunwe nri, na ukwuu rụọ udia arụmọrụ na mmepụta ikike
Akụkụ nke Igwe Ntugharị Vetikal Na-agwakọta
Igwe a bu ihe nkpuchi ihe nkpuchi ohuru ohuru, nke mejuputara ihe di iche iche, uzo di iche iche, ogwe aka, ihe ndi ozo Anyị ịmụta pụrụ yi alloy maka gburugburu agụba maka ogologo ọrụ oge. Diski agwakọta feeder na-azụ site n’elu na ihapu na ala na ezi uche Ọdịdị. Njirimara nke igwe ahụ bụ na njedebe ntụgharị nke onye na-ewepụta ihe na-eme ka isi ihe na-akpali akpali iji rụọ ọrụ, na ihe ntụgharị ahụ edozila ezé ezé, ya mere, ụda na-akpali akpali na-eme ka ezé na-akpali akpali na ịgwakọta ihe zuru oke ma na-eme ka ihe ahụ pụọ ọbụna. Enwere ike imeghe ọdụ ụgbọ mmiri dị ka mkpa iji chịkwaa usoro nke ihe iji hụ na nrụpụta dị mma nke usoro ahụ niile.
Ngwa nke Igwe Vetikal Na-agwakọta Igwe nri
Ọ bụ ụdị ọhụrụ agwakọta & nri akụrụngwa maka na-aga n'ihu na-agba ọsọ. Ọ na-bụ-eji na fatịlaịza nhazi ụlọ ọrụ, na anyị na-enye uzo-isi ndabere fatịlaịza oru malite imewe, na-amị, echichi, debugging na oru ọzụzụ. A nwekwara ike iji ya na kemịkal, ihe gbasara ọla, ebe a na-egwupụta akụ, ihe ụlọ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
(1) Ihe Diset Vetikal Gwakọta Nrier Igwe nwere ogologo ọrụ ndụ, ike ịzọpụta, obere olu, ngwa ngwa akpali akpali na-aga n'ihu na-arụ ọrụ.
(2) N'ime diski ahụ nwere ike jikọta ya na efere polypropylene ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara. Ọ dịghị mfe ịrapara n'ihe na iyi eguzogide.
(3) The cycloid pinwheel reducer na-eme igwe nwere àgwà nke kọmpat Ọdịdị, adaba ime ihe, edo nri, na-adaba adaba orùrù na njem.
(4) Ihe Diset Vetikal Gwakọta Nrier Igwe na-azụ ihe site na elu, na-agbapụta site na ala, nke nwere ezi uche.
(5) Akara ahụ dị n'etiti elu ọ bụla jikọtara ọnụ, yabụ igwe na-agba ọsọ.
Vetikal Disc inggwakọta feeder Machine Video Display
Vetikal Disc inggwakọta feeder Machine Nka na ụzụ oke
Nke gara aga: Rewghasa Extrusion Solid-mmiri mmiri separator
Osote: Na-adọnye & Ngwa Nri